ငါမုန်းတဲ့သူများ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
October 23, 2006, 8:03 am
Filed under: Lin Let Kyal Sin, True Feelings
၁) အာဏာရှင်ဆန်တဲ့ လူတွေကို ခါးသက်နေအောင်မုန်းတယ်
၂) စောက်စကားကို မလိုအပ်ဘဲပြောပြီး သူများအကြောင်းကို မလိုအပ်ဘဲ အားအားယားယား ထိုင်ပြောတဲ့ မိန်းမတွေကိုမုန်းတယ်.. အဲဒါကြောင့်ငါ့ကို အချို့သူများက မိန်းမလို့မထင်တာ.. မြင်ရင်တော့ မိန်းကလေး သိပ်ဆန်တော့ အံ့သြကြတယ်.. ရေးတဲ့စာတွေကပြင်းတာကိုး..
၃) သူများ အကျိုးစီးပွားကိုပျက်အောင်လုပ် ၊ သူများနာမည်သိက္ခာကို လိုက်ချတဲ့ လူတွေကိုမုန်းတယ်
၄) တခုခုဝယ်ဖို့လုပ်တိုင်း အမြဲ တမေ့တမောတန်းစီရတဲ့ ဒီနိုင်ငံကိုလည်းမုန်းတယ်
၅) ငါ့ကို အပေါ်ယံရှပ်ခင်ပြီး စိတ်ထဲကနေ အမုန်းပွားနေတဲ့ လာလာပြီးဟန်ဆောင်ပေါင်းနေတဲ့ မြေခွေးမတွေ မြေခွေးထီးတွေကိုမုန်းတယ်. သူတို့ဟန်ဆောင်တော့ ကိုယ်က မသိသလို လိုက်ပြုံးပြနေရတာ မောလွန်းလို့
၆) ဘာပြသနာမှမရှိဘဲ ငါက တခါတလေ ခင်လို့လိုက်နောက်တာကို သိသားနဲ့ ဘလိုင်းကြီး လာဖောင်းတဲ့ စင်ကာပူက အပျိုကြီး၂ယောက်ကိုမုန်းတယ် ( ပေါ်တင်ပဲ)
၇) ငါဘယ်သူ ဘယ်ဝါမှန်းသိတာ တအားနည်းတဲ့ ဒီအွန်လိုင်းလောကမှာ ငါ့နာမည်ကို ဖျက်နေတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုမုန်းတယ်… မာနဆိုတာ အရှင်သခင်လို မကောင်းဆိုးဝါးတွေနဲ့ ပတ်သတ်လာရင် ကိုးကွယ်တဲ့ငါ့ကို ငါ့စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေ အထင်အမြင်သေးအောင် လိုက်ပြီး အချိန်ယူ ဖျက်ဆီးနေတဲ့ မနာလိုသော မိစ္ဆာတွေကိုမုန်းတယ်။
၈) ရိသလို သဲ့သလိုလိုနဲ့ နောက်ကွယ်ရာမှာ အတင်းပြောတဲ့ ယောက်ျားမဆန်သော အခြောက်တွေကို မုန်းတယ်
၉) ကိုယ်တိုင်တော့ ဘာမှမဟုတ်ဘဲ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လေကျယ်နေတဲ့ ဒေါ်စ်ိန်မမအဖွဲ့ကိုကြည့်မရဘူး
၁၀) ဘာမဟုတ်တဲ့နာမည်လေး တစ်ခုကို ရယူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ငါ့မှာ ဘ၀င်ဆိုတာမရှီဘဲ ငါဘ၀င်မြင့်တယ်လို့ လိုက်ဖွနေတဲ့ အကောင်တွေကိုမုန်းတယ်
၁၁) အတင်းပြောတဲ့မိန်းမတွေငါမုန်းတယ်.. ငါကိုယ်တိုင် မကျေနပ်ရင် ပေါ်တင်ပြောတယ်. နောက်ကွယ်မှာ `ဟိုတယောက်ကဟိုလိုကြီးဘာဘာညာညာ´ဆိုပြီး တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကပ်ပြောတာ ၀ါသနာမပါဘူး
၁၂) အဆင့်အတန်း သိပ်ခွဲခြားထားတဲ့ တခုခုဝယ်ရင်တောင် citizenship ကိုကြည့်ပြီး ခွဲထားတဲ့ ဒီနိုင်ငံ ဥပဒေကို မုန်းတယ်
၁၃) ပြည်ပမှာနေပြီး ပညာနည်းနည်းတတ်လာရင် ထောင်ကြွနေတဲ့ လူတွေကိုမုန်းတယ် … အထဲကလူတွေကို နှီမ်ပြောတာ မြင်ဖူးနေလို့
၁၄) ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်သောအရာ သူများလုပ်နေရင် မနာလိုစိတ်နဲ့ဖျက်ဆီးသူတွေကို မုန်းတယ်
၁၅) သံရုံးအသိုင်းဝိုင်းကဆိုပြီး လေကျယ်နေတဲ့ မကြာခင်ဂျောင်းရမယ့်ဟာတွေကို မုန်းတယ်
၁၆) ပေါ်တင်မပြောရဲဘဲ နောက်ကွယ်ကနေ စိန်ခေါ်တဲ့ လူတွေကိုမုန်းတယ်
ဒီလောက်ပဲရေးအုန်းမယ်.. ထပ်သတိရရင်ထပ်ဖြည့်မယ်.. နာမည်အတိအကျ ပြောချင်လည်း ထည့်ပြောမယ်.. ဒီလိုမျိုးအကြောင်းကို တခြားဘလော့ခ်ဂါတွေလည်း ရေးခဲ့ဖူးတာ တွေ့ဖူးသလိုပဲ… ကိုယ့်စိတ်ထဲရှိတာ ရေးနေခြင်းပါပဲ.. ခိုးယူတယ်လို့အော်ချင်တဲ့သူ ဖင်နဲ့ခေါင်းဆောင့်သေလိုက်..